LRDP: December 2013
၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ (၇၅) နှစ်မြောက် စိန်ရတုအခမ်းအနား ပြည်မြို့ တွင်ကျင်းပ၊
၁၃၀၀ ပြည့် ရေနံမြေအရေးတော်ပုံ စိန် ရတုအခမ်းအနားအား ၃၁၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၃ နေ့ပြည်မြို့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပြည်ခရိုင် အတွင်းရှိ မြို့ နယ်များမှ ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်များ၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ချောက်မြို့ များမှ ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်များ ၊ရန်ကုန်မြို့ ၁၃၀၀ ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပရေး ကော်မတီဝင်များ၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသော သခင်၊သခင်မကြီးများ၏ မိသားစုဝင်များ၊ သခင်းဖိုးလှကြီး၏ မိသားစုဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ၁၃၀၀ ပြည့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်များအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Posted by LRDP at 11:44 PM No comments:
ရွှေ့ ပြောင်း အလုပ်သမားများနေ့(၁၈-၁၂-၂၀၁၃)
Posted by LRDP at 7:52 AM No comments:
သြစီ ရောက်စဉ် အရှေ့တောင်အာရှ မှ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်အမများနှင့် သမုဒ္ဒရာအနီးထိ သဘောင်္ စီးထွက်ရင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ရခဲ့
အင်ဒိုနီးရှား နှင့် မလေးရှား MTUC မှ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ညီအမ များ နှင့် အတူ
Posted by LRDP at 10:52 PM No comments:
သြစီ ရောက်စဉ် နိုင်ငံတကာ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များနှင့် သမုဒ္ဒရာအနီးထိ သဘောင်္ စီးထွက်ရင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ရခဲ့
သြစီ မှာ ကျင်းပ တဲ့ SIGTUR ကွန်ဖရန့် ကို မြန်မာပြည်က နေ ကျမတို့တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ အခါ သြစီရောက် တောင်အာဖရိ က ITUC ကိုယ်စားလှယ် COSATU က အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေ အရှေ့ အာဖရိက ၊ ချီလီ ၊ ဘရာဇီး ၊အာဂျင်တီးနား စတဲ့ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ခု လို ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ ခဲ့ကြပါတယ် သမဂ္ဂ ဆိုတဲ့ ပေါင်းစည်းခြင်းရဲ့ လေးနက်မှုကို ကျမတို့တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီ ယနေ့ က စ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာပြည်အရေး ရိုင်းပင်းစွာ ၀ိုင်းဝန်းသွားမယ်ဆိုတာ လည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
Posted by LRDP at 10:38 PM No comments:
1300 ပြည့် ရေနံမြေအရေးတော်ပုံ သပိတ်တိုက်ပွဲ (၇၅) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ချောက်မြို့ တွင်ကျင်းပ
၁၃၀၀ ပြည့် ချောက်ရေနံမြေ ရေနံမြေအလုပ်သမားသပိတ် (၇၅ ) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားအား ချောက်မြို့ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊ လွှတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် သခင်၊သခင်မကြီးများ၏ သားသမီးများ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် အဖွဲ့ ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ပြီး သခင်ဖိုးလှကြီး အုတ်ဂူသို့ချီတက်အလေးပြု ခဲ့ကြသည်။
Posted by LRDP at 10:41 PM No comments:
SIGTUR 2013 CONGRESS သို့မြန်မာနိုင်ငံမှ တက်ရောက်ခဲ့
SIGTUR ဟာ ၃နှစ်တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျ နိုင်ငံတွေမှာ ညီလာခံ လုပ်ပါတယ်။ သူ အဖွဲ့ ဝင်တွေ ကမနည်းပါဘူး ကမ္ဘာ့ တောင်ခြမ်းနိုင်ငံ၃၅ နိုင်ငံက အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေ များပါတယ် ။ ပိုထူးခြားမူကတော့ COSATO က တောင်အာဖရိက ရဲ့ တကယ့် အားကောင်းမောင်းသန် သမဂ္ဂ ကြီးတွေ အပါ အ၀င် ITUC တောင်အာဖရိက ကိုယ်စားလှယ် ACTU , KCTU, KPTU ,CUT , တို့ ဟာ တကယ့် ကို သမိုင်းကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဖိုက်တာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂကြီး တွေပါ ။ဒီမှာ ကျမတို့ ကို တက်ေ၇ာက်ခွင့်ပြုတာ အင်မတန်ကို မှ ဂုဏ်ယူ မိပါတယ် ။ ဘာပိုသိလာလဲ ဆိုတော့ ငါတို့ နိုင်ငံအတွက် အများကြီး ကြိုးစားရဦးမှာ ရုန်းကန်နေရဦးမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted by LRDP at 10:40 PM No comments:
Australia ရောက်မြန်မာညီအကို မောင်နှမများ
မြန်မာ တွေ ရဲ့ ဝေးတသက်သက် ချစ်ခဲ့ကြတာတကယ်ပါ ။ အရင်က မခင်ခဲ့ဘူးလည်း ကိုယ့်မြန်မာတွေ အခြားနိုင်ငံသားဖြစ်နေရတာ ဘ၀ကိုတော့ ကျမ ၇င်နင့် မိပါတယ် ဒီစနစ်ဆိုး ကြောင့် သွေးရင်းတွေ ဝေးခဲ့ကြတာ။မြန်မာတွေ သြစီ ရောက်တယ်ဆိုတာ သိတာကြားတာ နဲ့မောင်ရင်းနှမ ညီအမများပမာ တကယ်ကို ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတာ သူတို့ တွေ ပါ ။ ဟိုးအဝေးကြီး စစ်ထနီ က ကိုတင်လှိုင် ကလည်း နိုင်တဲ့ဝန် နဲ့ကူညီရှာပါတယ် ။မည်သို့ ဆိုစေ မတွေ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘ၀ကို လည်း အားကြီး နားလည်ပါတယ် ။။
Posted by LRDP at 10:33 PM No comments:
သြစီ ရောက်ရခြင်း သည် နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးသွားခွင့်ရရုံမျှမက ကျမ အား တိုင်းပြည့် တာဝန် လူမျိူးအရေး ပိုကြိုးစားစေရန် သမဂ္ဂ တို့ ၏ စွမ်းအားများ ရရှိခဲ့သည်။ အလိုမကျမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ငါတို့ ကြိုးစားကြရဦးမည် အင်မတန်ကို ကြိုးစားကြရမည်၊ နိုင်ငံ တကာမှ ညီနောင် အလုပ်သမားသမ္ဂများနှင့် အတူ မြန်မာအလုပ်သမားထုအတွက် အလုပ်တွေ လုပ်ရဦးမည်၊
Posted by LRDP at 10:29 PM No comments:
1300 ပြည့် ရေနံမြေအရေးတော်ပုံ စိန်ရတုအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ၊
Posted by LRDP at 2:40 AM No comments:
Workers Protest for Wage Increase
ကြောကျဖွူစီမံကိနျး ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု ငှမြေားလို့ မွနျမာ အကွှေးတငျနိုငျ
လီဆူဒုက္ခသည်ကလေးများနှင့် လုလုအောင် (ဓာတ်ပုံ)
Uploads by MyanmarExpressGroup
ဒီလူပြောသွားတာ ကိုယ်ပြောချင်နေတာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းပဲ။
Uploads by Kamayut MediaTv
ဒ​ဂုံ​ဆိပ်က​မ်း စည်ပ​င်ြေ​မ​သိ​မ်းချင်လို့​ လယ်သ​မားေ​တွ​ကို ဒု​က္ခေ​ပးေ​န
How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?
IWT - Inland Water Transport, Myanmar.
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSMINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Fernando Julio Antonio Quiros Campos as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Peru to the Republic of the Union of Myanmar
Postponing of Tender Proposal Deadline for Social Security Board Information System
Myanmar Post and Telecommunication
Web-based Teaching System : welcome
Welcome to CTU | CTU
Welcome to Ministry of Information
Welcome to Ministry of Transport
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မူးယစ်နှိမ်နင်းမှု လူ ၃,၀၀၀ ကျော် ဖမ်းထား
ေ ရာင် ခြ ည် ဦးအ လု ပ် သ မား များ အ ဖွဲ့
မြ၀တီ - မြန်မာနိုင်ငံမှ လူကြိုက်အများဆုံးဝဘ်ဆိုက်များ
The Voice Myanmar -
7Day News Journal - ၇ ရက် သတင်းဂျာနယ်
Planet : News
No.1 myanmar cars website « one stop online marketplace to buy and sell your cars
Burma Today - Burma and Burmese Community News Update
Khit Lu Nge | Myanmar News
Venus News Weekly | Facebook
Post by Thu Zaw.
labour strike in Industrial Zone
NGO, embassy help bring Cambodian migrants home
Statement by the UN Resident and Humanitarian Coordinator ai in Myanmar, Knut Ostby, on the International Day Against Homophbia, Transphobia and Biphobia.
Forum Discussions - Myanmar Network
Three Diseases Fund, Myanmar
HIV can beashock to the system
Thabyay Education Network
Home Page | National Endowment for Democracy
(MIMU)-Myanmar Information Management Unit
Myanmar | Mercy Corps
Union Aid Abroad - APHEDA: Home Page
၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ (၇၅) နှစ်မြောက် စိန်ရတုအခမ်...
သြစီ ရောက်စဉ် အရှေ့တောင်အာရှ မှ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်အမမ...
သြစီ ရောက်စဉ် နိုင်ငံတကာ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များနှင့် ...
1300 ပြည့် ရေနံမြေအရေးတော်ပုံ သပိတ်တိုက်ပွဲ (၇၅) န...
SIGTUR 2013 CONGRESS သို့မြန်မာနိုင်ငံမှ တက်ရောက...
1300 ပြည့် ရေနံမြေအရေးတော်ပုံ စိန်ရတုအခမ်းအနား ဖိတ...
Labours Rights are Human Rights